Global Voices teny Malagasy · admin – Mey 2019
admin · Mey, 2019
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Mey, 2019
Akon'ny tontolon'ny bilaogy Kiswahili: Hira, poezia, literatiora, politika (2005)
Afrika Mainty31 Mey 2019
Mawazo na Mawaidha avy any Kenya manaraka akaiky ny famantarana ireo endrika isan-karazany amin'ny rindrambaiko sy programa solosaina amin'ny teny Swahili. Tamin'ity herinandro ity dia nanoratra sy naneho hevitra fohy mikasika ny fampahafantarana ny programan'ny Windows sy Office amin'ny teny Swahili izy.
Ny atao hoe trano LAN
Antsafa30 Mey 2019
Felipe Vaz no mpandrindra ny Instituto Overmundo, izay mampiroborobo ny fidirana amin’ny fahalalahana sy ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Brezila amin'ny alàlan'ny fomba amam-panao nohavaozina amin'ny serasera, ny fizakamanana ara-tsaina ary ny teknolojia. Soritsoritan'i Felipe ny "revolisionan'ny trano LAN" (Local Area Networks - tambajotram-paritra ao an-toerana) any Brezila.
Amadou M. Ba avy ao amin'ny AllAfrica.com
Mediam-bahoaka30 Mey 2019
Mpiara-manorina sady filohan'ny AllAfrica.com, ilay mpanangom-baovao an-tserasera lehibe indrindra sady mpaninjara ny vaovao avy any Afrika Atsimon'i Sahara amin'ny teny Anglisy sy teny Frantsay i Amadou M. Ba. Izy ihany koa no tale mpanatanteraka ny African Media Initiative, izay mikendry ny hanome tanjaka ny sehatry ny fampitam-baovao aty Afrika
Ny zo lazain'ny Fanitsiana voalohany sy ny fampijaliana antserasera
Etazonia30 Mey 2019
Any amin'ny sekoly manerana an'i Amerika, olana hatrany ny fampijaliana antserasera. Nitondra ny olana teo amin'ny adihevitra nasionaly ny tranga momba ilay zatovo iray tao Missouri namono tena taorian'ny fampijaliana azy antserasera.
Afrika Mainty27 Mey 2019
Kenya: Tafiditra an'ivo sy ao amin'ny hevitra politika Kenyana ny fitsidihana tany Londra
Afrika Mainty21 Mey 2019
Nesorina tamin'ny herinandro lasa ny visa ahazoan'ny minisitry ny fitaterana Kenyana, Chris Murungaru, miditra ao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK); African Bullets and Honey mijery ny psykôlôjian'ny fitsidihana an'i Londra ho an'ireo politisiana Kenyana.
Fitsidihana ny bilaogy Kenyana
Nanjaka tamin'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana sy ny vondrom-piarahamonina antserasera Kenyana nandritra ny andro vitsy lasa i Lucy Kibaki, vadin'ny filoham-pirenen'i Kenya, indrindra taorian'ny tehamaina izay re manerana izao tontolo izao.